Arimaha Soomaaliland Helkay ku Biyo Shuban Doonaan? – Idil News
Arimaha Soomaaliland Helkay ku Biyo Shuban Doonaan?
Posted By: Jibril Qoobey February 22, 2020
Soomaaliland ma iyada oo dal gaar ah oo ictraaf leh ayey Soomaliya ku biirtay?
Ma waxaa jiray, sida Axmed Samatar idaacadaha ka yidhaa, 40 dal in ka badan oo aqoonsay Somaliland June 1960, mise waa sheeko baraley?
Isu taga labadda waxood goormuu dhacay, haduu dhacayse Soomaaliland halkay ku dambeysay?
Fakirka ah in Soomaaliland ka go’do Soomaali Republic ma wax uu curtay 1988 mise fakirkaas mudo dheer ayuu jiray?
Aduunku sideebuu u maarayn karaa arinta huracan ee banjartay.